Dagaalkii Pacific (Af-Isbaanish: Guerra del Pacífico) (1879-kii ilaa 1884) waxay ahayd natiijada sheegashada xuduudaha Chile ee dhulka xeebta ee Bolivia ee xaafada Atacama. Bolivia ayaa xulufo la leh xulalka Peru ee Chile. Dagaalku wuxuu ku dhammaaday guushii Chile, taas oo ay leedahay dhul aad u taajir ah oo ka soo jeeda Peru iyo Bolivia. Ciidamadda Chile waxay qabsadeen gobolka badweynta ee Bolivia, gobolka xeebta hodanka ah, Peru waxaa lagu guuleystay badweynta Chile.
Dagaalyahannadu waxay ku dagaalameen Badweynta Baasifigga, degaanka Atakama, lamadegaanka Peru, iyo gobollada buuraleyda ah ee Andes. Shan bilood ee ugu horeeyay dagaalka ayaa ka soo baxay ololaha badda, sida Chile ay kufaraxday in ay abuurto waddo xeebeed ku salaysan oo ay u adeegsato ciidamadeeda ku sugan dhulgariirka ugu caansan.
Bishii Febraayo 1878, Bolivia waxay canshuur cusub ku soo rogtay Shirkadda Macdanta ee Chilean ("Compañía de Salitres iyo Ferrosarril Antofagasta", CSFA), inkastoo Bolivia ay damaanad qaadday heshiiskii 1874 ee Heshiiskii Shicibka ee Chile ama Shiinaha muddo shan iyo labaatan sano ah. Bolivia waxay diiday oo waxay u aragtay mawduuc ka mid ah maxkamadaha Bolivia. Chile waxa uu ku adkaystay oo uu ku wargeliyay xukuumadda Bolivia in Chile ayan mar dambe tixgelin doonin heshiiskii 1874 ee Boundary haddii Bolivia aysan hirgelin fulinta sharciga. Bishii February 14, 1879 markii ay Bolivian isku dayday in ay xaraashto hantida la wareegay ee CSFA, ciidamada hubaysan ee Chile waxay qabsadeen magaalada dekedda Antofagasta. Bolivia ayaa ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah Chile waxana ay ugu yeertay Peru inay ku biirto isbahaysigooda, halka Chile ay dalbatay in Peru ay ku dhawaaqdo dhexdhexaadin. Peruwian iyo Bolivia ayaa gacanta ku hayay xulafadooda u dhexeeya Peru iyo Bolivia oo 1873, laakiin 1 Maarso 1879-kii. Abriil 5, ka dib markii Peru diiday, Chile waxay u sheegtay dagaalkii labada wadan. Maalintii xigtay, Peru ayaa ka jawaabtay qirashada weerarrada basaasiinta.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=War_of_the_pacific&oldid=223067"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 3 Nofeembar 2021, marka ee eheed 20:55.